पर्यटन व्यवसायीलाई टिक्नै गाह्रो
११ कार्तिक, २०७७ | 27 Oct, 2020
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । खास गरेर नेपालमा पर्यटन वर्ष २०२० को घोषणा भएसँगै यसमा अरबौंको लगानी निजी क्षेत्रबाट भयो । महामारी संसारभर फैलिएसँगै पर्यटक आउन बन्द भएपछि सरकारले पनि घोषित कार्यक्रम स्थगन गरे । जसका कारण पर्यटन क्षेत्रमा लागेका सानादेखि ठूला व्यवसायीको लगानी डुब्ने खतरामा छ ।
साझा कथा सम्बाददाता ३० जेठ, २०७७
सरकारले कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई विस्थापित हुन नदिनका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुबैमा सान्त्वना त दियो । तर, त्यो प्रयाप्त हुन सकेन । सरकार आफैले ‘पर्यटन वर्षमा पर्यटक बढ्छ, लगानी बढाउनुस्’ भनेर जुन आश्वासन दियो; हाल सो अनुरुपको सहानुभूति दिन सकेन ।सरकारले व्यवसायीहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेपछि ठूलो ऋणमा परेका व्यवसायीहरु विस्थापित हुँदैछन् । भर्खरै पर्यटनमा लागेका उर्जावान व्यवसायीहरु कम्पनी विक्री गर्न थालेका छन् । अवस्था नाजुक बन्दैछ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमअझै बढ्दैछ । नेपाल सहित संसारभर संक्रमण र मृत्युदर बढेको बढैछ । दैनिक गुजारा चलाउनै गारो भएको अवस्थामा पर्यटक भएर घुम्न निस्कने कुरै भएन । देश भित्रै घुमघाम गर्न जोखिम भएको अवस्थामा देश बाहिरका पर्यटक आउने कल्पनै नगरौं । जानकारहरु अझै एक/दुई वर्ष पर्यटक नआउने र त्यसबाट आम्दानी नहुने हुँदा पर्यटनमा लगानी गर्ने र व्यवसाय चलाउनेहरुलाई अझ बढी संकटको घडी आउन सक्ने बताउँछन् । यो अवस्थामा सरकारको भूमिका के ? व्यवसायीहरु के चाहन्छन् ? सरकारको कस्तो आश्वासन छ ? र यो संकट कसरी अन्त्यगर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पर्यटन विज्ञको धारणा सहितको साझा कथामा ‘पर्यटनको कथा’ ।
© 2020 Sajha Katha